Umthandazo wokuphakamisa umphefumlo womntu deceased ▷️ Discover Online ▷ ➡️
Umxholo we ukufa Yinto abaninzi abakhetha ukubaleka kuyo kwaye ngenxa yokuba ivelisa iintlungu kunye nokubandezeleka, ke ngoko, siya kukufundisa umthandazo wokuvusa umphefumlo womntu oswelekileyo ukuze uthandaze ngalo maxesha anzima.
Umthandazo wokuphakamisa umphefumlo
1 Umthandazo wokuphakamisa umphefumlo womntu oswelekileyo
1.1 Ujongene nentlungu yokufa, ungalahli ithemba!
1.2 Uthando nenceba yeNkosi ingaphezulu kokufa uqobo
1.3 Vula intliziyo yakho kuthando nentuthuzelo kaThixo wethu
2 Umthandazo wabanyanisekileyo abathembekileyo
3 Umthandazo womphefumlo
Amaxesha amaninzi xa sizivumela ukuba sibe lusizi ngokusweleka komntu esimthandayo, kuyacaca ukuba siyazikhwebula eluthandweni ebomini bethu kwaye ngenxa yesi sizathu abantu abaninzi bayazikhwebula kuThixo kwaye bayabuphika ubukho bakhe kuthi.
Kungenxa yoko le nto xa sikhulisa umthandazo wokuvusa umphefumlo womntu oswelekileyo Siwusondeza loo mphefumlo kwaye sisondele kwisandla sasekunene sikaThixo wethu kwaye sikwafumana uxolo ezintliziyweni zethu.
Nazi ezinye iingcebiso xa unesifo ngale ndlela kwaye unokunika intlungu yakho kuThixo ngenxa yomphefumlo osendleleni eya ekuphumleni kwawo okungunaphakade.
Ujongene nentlungu yokufa, ungalahli ithemba!
Intlungu yokuphulukana nomntu omthandayo, yongezwa kwiimeko ezahlukeneyo ezithi zivele ngelo xesha, inomdla kangangokuba ungakholelwa ukuba awuzukuphinda uphinde wonwabe okanye uve uthando kwakhona.
Kwakunokwenzeka okufanayo nakubapostile emva kokubethelelwa nokubulawa kukaYesu Krestu, kodwa noYesu ngokwakhe ngaphambi kokuba afe wabaxelela ukuba bangaze balahle ithemba, kuba emva kweentsuku ezintathu bazakumbona evuka kwakhona.
Amaxesha amaninzi kwabanye abantu xa ukufa kusondela ebomini babo, bacinga ukuba akusengqiqweni ukukholelwa kuThixo. Kodwa kufuneka sihlale sikhumbula ukuba uThixo uluthando ngokwe-1John 4: 8, wasidala ngothando kwaye usimema ukuba sihlale eluthandweni.
Kodwa nangona kunjalo, iintlungu kunye nokubandezeleka kucingelwa ukuba komelele ngaphezu kothando lwenceba lukaThixo wethu. Simane siphelelwa ngamandla xa sijongana nokubandezeleka kunye nokuphelelwa lithemba kungena kuthi ngenxa yokuba usizi kunye nokukhathazeka kuyakhula kwaye intsingiselo yokuphila ayifumaneki.
Kodwa xa oku kusenzeka, kufuneka sibalekele emthandazweni, kufuneka sihlale sicinga ukuba uThixo unathi kwaye ungakuthi, yiyo loo nto kungafuneki siphulukane nokholo lokuba siza kuphila kwimeko embi enjalo kwaye akufuneki siphulukane nethemba Oko kusixelele kakhulu. INkosi yethu uYesu Krestu.
Uthando nenceba yeNkosi ingaphezulu kokufa uqobo
UThixo uhlala eyazi yonke into eyenzekayo kuthi kwaye angahlali engenamdla. UThixo wethu akanantsingiselo, akajiki xa ejongene neemeko ezibandezelayo esinazo, okanye asishiye sishiywe ngamabona-ndenzile.
Kuyo yonke iminyaka yembali yethu, kancinci kancinci besikulungele ukufika koMsindisi, apho iLizwi likabawo liba sisenzi kwaye lifake uMntu wesibini kaBathathu Emnye oNgcwele kwisibeleko sikaMariya, unina kaYesu de uba yindoda kwaye aphile iminyaka emithathu yokugqibela yobomi bakhe esenza imimangaliso kunye nokushumayela ubukho bothando kuthi.
Emva kokubandezeleka emnqamlezweni, uyavelana nathi aze afe ngenxa yokusithanda, ukusisindisa ebubini nasekubandezelekeni okungunaphakade. Ke ngoko, akufuneki siphume lithemba, kuba uyakuqonda ukubandezeleka kwethu kwaye uzibeka ezihlangwini zethu, ade asithandazele nakuYise.
Kufanelekile ukuhlala kulo mhlaba nokuba kufuneka sive ubunzima ngamanye amaxesha, kodwa xa sicinga ukuba siphambi kukaThixo nonyana wakhe uYesu, indlela yothando nobomi obungunaphakade ziya kuba zezethu. Abo bakholelwa kuKrestu banesiqiniseko sokuvuka kunye naye.
Vula intliziyo yakho kuthando nentuthuzelo kaThixo wethu
Emva kokuphawula kuzo zonke ezi zinto zingasentla, kuya kufuneka uzibuze umbuzo obaluleke kakhulu, uyakholelwa ngakumbi kubunzima obudala ukubandezeleka okanye amandla yothando lukaThixo?
Lo mbuzo kufuneka sihlale sizibuza kubo bonke ubomi bethu, kuba ixesha lisifundisa ukuba ayikho enye indlela yokukhetha ngaphandle kweNkosi yethu uYesu Kristu, kungenjalo sisuka kude nothando.
Ubomi bunamaxesha apho umendo wothando nobomi obungunaphakade buzaliswe kukubandezeleka nokufa. Asikhululwanga ekuhambeni kubunzima ngexesha elithile ebomini bethu. Ukuba usandul 'ukuswelekelwa ngumntu omthandayo, khumbula ukuba ukufa akuyondlela yokugqibela okanye ligama lokugqibela.
Nangona abo kuthi bahlala kwindlela yasemhlabeni besiva iintlungu ezinzulu zokumka komntu esimthandayo, kufuneka sihlale sizimela kwaye siziva siphumle kuba kufuneka sazi kwaye siqonde ukuba lowo umthandayo ushiye isandla sokunene sikaThixo wethu, Uyonwabela uthando olusulungekileyo nolunyanisekileyo kwaye lolona luhle kuzo zonke. Uthando lukaThixo. Ngenxa yokuba kufuneka sibalekele, abo kuthi bahleli kumhlaba wasemhlabeni.
Emva koko siza kukufundisa imithandazo emibini eya kukunceda ucele umphefumlo walowo umthandayo ukuba ufikelele ebukumkanini bamazulu, kwaye ufumane uvuyo nothando ngokuswelekelwa ngumntu omthandayo.
Umthandazo wabanyanisekileyo abathembekileyo
NguBawo ongunaPhakade, Thixo uSomandla! Thumela zonke iingelosi zakho ukuba zikhuphe lo mphefumlo kwindawo yentlambululo-miphefumlo endibongoza ngenjongo, ndiyakucela ukuba umse eluzukweni lwakho kwaye ndiyakucela Nkosi ukuba umxolele ukuba akakhange azibhatalele iziphoso neempazamo zakhe ngokufaneleka kwe Isohlwayo sokuba unyana wakho adlule kuthi sonke, Nkosi yam Yesu Kristu. Ndiyakucela, ngenceba yakho, uthathe lo mphefumlo kwaye ungabi ngqongqo kwisigwebo sawo, ungasivumeli siwele esilingweni kwaye usihlangule kubo bonke ububi. Amen.
Thixo wam, uthathe umntu ebendimthanda ngentliziyo yam, kodwa ndiyayamkela intando yakho kuba ubuyifuna ngoluhlobo, ngenxa yoko ubungcwele bakho buya kuzalisekiswa.
Intuthuzelo eseleyo kum liThemba lokuba ufumene umphefumlo wakhe esifubeni senceba yakho kwaye uyakundivumela ukuba ndimjoyine xa kufika ixesha lam.
Ukuba ngenxa yezono zakho umphefumlo wakho ukwindawo yentlambululo-miphefumlo, ndikunika imithandazo yam enyanisekileyo kunye nemisebenzi emihle, kodwa ngaphezulu kwako konke ndikunika ukurhoxa kwam ngenxa yelahleko elusizi ngolu hlobo.
Mnike ukuphumla okungunaphakade kwaye ukhanyise ukukhanya kwakho okungapheliyo ngonaphakade.
Yanga imiphefumlo yabo bonke abathembekileyo ihambile, nguThixo onenceba, ingaphumla ngoxolo. Amen.
Kwinqaku elilandelayo unokufumana indlela yokuthandazela irosari yomfi, oku kukuncedisa ekuphakamiseni umphefumlo wabo bonke abathembekileyo abathembekileyo.